AJỤJỤ AJỤJỤ BAỊBỤL
A na-eji ụgbọ mmiri ebubata ihe ndị anyị na-ebugharị EMS EGO!
Ajụjụ: Gini bu Oge Inwetafefe Edere na Ntuziaka m?
US, UK, CA, Oge Mbuga Oge AUS: Oge 12-25 (EMS Na Ebe Nsuso)
Oge Mbuga ozi: 10-14 ụbọchị (DHL na Ebe Nchọpụta)
Oge Mbuga Ozi: -10bọchị 14-XNUMX (DHL Na Destchọta Ebe)
US, UK, CA, Oge Mbuga Oge AUS: Oge 10-25 (EMS Na Nchọgharị Ebe)
ọ bụla akpụkpọ ụkwụ iwu ndị na-abịabeghị n'ime ụbọchị 45 nke nhazi nhazi ruru eru maka nkwụghachi ma ọ bụ nnabata n'efu.
Ajụjụ: Olee mgbe M ga-enweta Ozi Nsuso Na Iwu M?
Maka iwu US nsuso nọmba ọnụọgụgụ nwere ike wepụta ụbọchị asaa ka emechara iwu maka nsuso data iji gosi. Gbaa mbọ hụ na ị na-eji weebụsaịtị nnweta ziri ezi nke bụ www.17track.net/en.
Maka iwu ntinye akara nke mba di iche-iche nwere ike rue ubochi iri mgbe emechara usoro maka nsuso data iji gosipụta.Ma jide n'aka na ị na-eji websaịtị ziri ezi nke bụ www.17track.net/en. Ka dụọ gị ndụmọdụ, iwu mba ụwa anaghị akwụghachi otu ugboro ma ebubata ya ma agaghị egosiputa data nnyefe ọ na-aga.
Anyị na-arụ ọrụ na ALL ahịa bụ iwu ikpeazụ. Nke a pụtara na ịnweghị ike ịkagbu, lọghachi, ma ọ bụ nata nkwụghachi maka iwu belụsọ na ọ bụ njehie na njedebe anyị.
Ajụjụ: Obi enweghị m obi ụtọ na akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ahụ na ezigbo. Kedu ihe m kwesịrị ịme?
A: Biko zitere anyị Email na nkwado@thekdom.com ma mee ka anyị mara ihe nsogbu ahụ! Anyị ga-esoro gị rụọ ọrụ iji dozie okwu ahụ. Biko cheta, ndị a bụ uwe elu ndị e biri ebi, nke emere ka ịtụ. Ozugbo anyị bipụtara akwụkwọ, anyị enweghị ike ibipụta ya ma ọ bụ weghachi ya na ngwaahịa. Yabụ, anyị ga-agba mbọ rụpụta ihe iji hụ na afọ juru gị maka ịzụta gị!
Ajụjụ: I mere ihie na iwu m. Gịnị Bụ Ngwọta Ya?
A: Anyị nwere nnukwu nwute. Ọ naghị eme ọtụtụ oge, mana ọ nweghị onye zuru oke. Email nkwado@thekdom.com anyị ga-eso gị rụọ ọrụ ka ọ dị mma. Ọtụtụ mgbe, nke a ga-achọ naanị ka ị zitere anyị foto nke njehie anyị mere ka anyị nwee ike a) nyochaa nkwupụta gị na b) kpọọ gị iji mezie ya.
Anyị nwere nnukwu ngwakọta nke ngwaahịa ndị echesighi ụlọ. Yabụ, mgbe ị nyere iwu ọtụtụ ihe n'otu oge, enwere ike ibupu ha iche ka ha nwee ike bịakwute gị ọsọ ọsọ. Inwere ike ịnata otu ihe tupu nke ọzọ, yabụ biko atụla ụjọ ma ọ bụrụ na ịnabataghị ihe gị niile otu oge, cheta na ha nọ n'ụzọ!